Holzụ ahịa ezumike online | Martech Zone
Holzụ ahịa Ezumike Online
Satọdee, Nọvemba 12, 2011 Satọde, Satọdee 19, 2015 Douglas Karr
Shoppingzụ ahịa ọnlaịnụ na-eto eto n’afọ karịa afọ… ma ọ dịghị ebelata. BlueKai weputara ihe omuma ndia na nkwadebe maka oge izu ahia a na ntaneti.
Site na infographic: Azụmaahịa dị n'ịntanetị na-arụ ọrụ buru ibu n'oge ezumike ịzụ ahịa ezumike ọ bụla kwa afọ kemgbe mmalite ya. Mana ka ahia Internetntanetị na-adịwanye nkọja [na ndị na-azụ ahịa na-aghọwanye web-savvy], ịzụ ahịa ezumike na-enwe mgbanwe dị omimi. N'okpuru ebe a bụ usoro ndị bụ isi sitere na oge ịzụ ahịa nke 2010 nke na-eme ka anyị mata otu esi azụ ahịa ezumike n'ịntanetị na-agbanwe.
Tags: 2010Oge ezumike 2010bluekaiịzụ ahịa ezumikeịzụ ahịa ezumike n'ịntanetị
Tinye Ntọala mmekọrịta na WordPress Okwu gị